Njengabathengisi, sihlala sicinga ngedatha yabathengi kunye nokuziphatha njengemihlaba emileyo njengobudala, ikhowudi yeposi, kunye nomnini khaya. Nangona kunjalo, siyaphoswa kukuhamba bukhoma kweziganeko ezenzeka kubomi babathengi. Iziganeko ezilula njengokutshintsha kwemozulu zinokutshintsha indlela yokuziphatha komthengi kunye nemikhwa yokuthenga. Ukuba ikhephu lisendleleni, umzekelo, sinokuba sithengela amavili amatsha okanye i-snowblower kwindlela yethu yokuhamba.
Ngokwesiqhelo, ababoneleli beenkonzo ze-imeyile benza ukuba umxhasi ajongane nenkqubo yokwenza i-imeyile isebenzise usetyenziso lwenkqubo yesicelo. Kuhle ukubona U-Yesmail oQhuba ubuhlakani enikiweyo, eyenza ukuba kube lula kakhulu kwishishini eliphakathi ukudibanisa amaphulo okubangela umsitho kumxube wabo wentengiso.